Renata+Ainara=Fitiavana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2008 19:51 GMT
IZO no mandika avy amin'ny teny Rosiana ny sombin-dahatsoratry ny mpampiasa ny LJ avmalgin mijery [RUS] ny fiovan'ny fokonolona mandrafitra an'i Moskoa:
Feno kisoratsoratra tahaka izao ny sezalava an-jaridaina manaraka iny Lalamben'i (Boulevard) Tsvetnoi iny: “Tiako ianao, Rustamchik. Gyuzel.” “Renat+Ainara=Fitiavana”, mitovitovy karazana amin'izany avokoa izy rehetra. Tsy misy anarana Rosiana na dia iray aza. Noteteziko avokoa hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany. Amin'ny Alahady maraina aloha dia tsy misy eo ny olona, fa rehefa tonga kosa ny takariva fa hipoka Aziatika Tafovoany ny kianja. Fa nahoana no eo? sa mitovy daholo ny any rehetra any?
Ireto manaraka ireto ny valiny avy amin'ny mpamaky [RUS] an'i LJ avmalgin.
Efa tamana manara-bolontany izany ka! Mariho tsara fa voasoratra amin'ny teny rosiana avokoa ireo rehetra ireo, ary manoratra ny fitiavan'ny iray amin'ny olo-tiany na i Renat na i Gyuzel fa tsy manoratra ny finoany an'i Allah. Fa hanaitra kosa raha amin'ny teny arabo no hanoratany, izay mety ho sombin-teny avy amin'ny Korany (Coran) na didy navoakan'i Khomeini na avy amin'i Nasrallah.
Vao nandalo ny lalamben'i Tsvetnoi indrindra aho telo andro lasa izay, nieritreritra aho tamin'izay fa manorina an'i Moskoa izy ny andavanandro fa eo kosa no mba andaniany ny andro rehefa tonga ny faran'ny herinandro 😉
Ka tsy ho tsotra be tahaka ny tsinain-trondro avokoa kosa ny zava-drehetra e! Ka mba mety ho fivoaran-javatra io. Ary i Moskoa koa dia tsy hoe renivohitry ny vahoaka Rosiana ihany, fa renivohitry ny fitambaram-panjakana lehibe izy (na ilay taloha na ny amin'izao fotoana izao), ka tsy maintsy mipoitra eny koa ny vokatr'izany toerana misy azy izany.
Mieritreritra aho fa zavatra mandeha ho azy izany ho ana tanàna manana mponina ana arivo arivony maro, sady mila (liana) ny fidiran'ny mpiasa mora karama koa na ny fitondrana na ny fandraharahana. Mety ho ratsy kokoa ny manjo raha miaina any amin'ny ghetto na toerana voatokana mahonena tahaka ny any Paris na any New York ireo zanabahoakantsika ireo.